बाच्नै गाह्रो भन्दै साग बेच्ने भाईरल दिदिले आफ्नो कथा सुनाएपछि भन्छिन् दुर्व्यवहार गर्ने ट्राफिकलाई धन्यवाद (भिडियो) – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /Video/बाच्नै गाह्रो भन्दै साग बेच्ने भाईरल दिदिले आफ्नो कथा सुनाएपछि भन्छिन् दुर्व्यवहार गर्ने ट्राफिकलाई धन्यवाद (भिडियो)
बाच्नै गाह्रो भन्दै साग बेच्ने भाईरल दिदिले आफ्नो कथा सुनाएपछि भन्छिन् दुर्व्यवहार गर्ने ट्राफिकलाई धन्यवाद (भिडियो)
चाबहिलको गोपीकृष्ण हल नजिक, ठेलामा तरकारी बिक्री गरेर जीविका गर्दै, परिवार पाल्दै आएकी, सरस्वती मैनाली, धेरै समस्या, सँगै बोकेर आफ्नो जिविका चलाइरहेकी छिन् । उनका पति बिरामी छन्, बच्चा साना छन्, गाउँ फर्किने ठाउँ छैन, आफू दैनिक औसधीको सहाराले मात्र सडकमा निस्किन सक्छिन् ।
तिनकै ठेलागाडा प्र’हरीले पल्टाउँछ र तराजु लु’ट्छ । स्तनमा क्या’न्सरको जो’खिम बढ्दै छ, किड्नी बिग्रेको छ र उनी ब्रुफिनका भरमा पसिना बगाइरहेकी देखिन्छिन् । कोरोनाको भ’यलाई आफ्नो पेट, परिवारको भोक र आश्रयको द’बाबले जितेको छ । यसप्रति हाम्रो सरकार, समाज र समुदायको के जिम्मेवारी हो भन्ने अहिलेसम्म प्रस्ट छैन ।
सरस्वती मैनाली त एक प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । हाम्रो समाजमा कयौं सरस्वतीहरुले लकडाउन र निषेधाज्ञापछि पाएका पि’डाको कुनै लेखा जोखा नै छैन । सरकारले कोरोना रोकथामका लागि घोसणा गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण नेपालीको पि’डामा झन् पि’डा थपिएको छ ।
कोरोना भाइरस सं’क्रमणको असर अझै कति भोग्नु पर्ने हो भन्ने अझै अनिश्चित छ । सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञा थपेसँगै उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् । मानिस रोजगार विहीन भएका छन् । हुँदा खाने वर्गको दिनहरु कठिन बनिरहेका छन् भने हुने खानेहरुको भान्सा पनि सहज छैन । लकडाउन र निषेधाज्ञाले सर्वसाधारणको दैनिकी झन् झन् ज’टिल बन्दै गइरहेको छ ।
हाम्रो समाजमा यस्ता हजारौं, लाखौं व्यक्तिहरु छन् जो भोकै बस्न बाध्य छन् । म’र्ने कि बच्ने दोसाँधमा छन् । तर यी ला’चार, गरिब, असहाय, मजदूरलाई बिर्सिएर सरकार भने मुखदर्शक बनेर बसीरहेको छ । दिनभरि काम गरेर साँझको छाक टार्न नसक्ने यिनको पि’डा कसले बुझीदिने ? आज हामीले सरस्वती मैनालीलाई भेटेर उनको संघर्ष र दु:खको कथालाई प्रस्तुत गरेका छौँ । अनेकौं समस्याबाट गुज्रिरीरहेकी सरस्वती मैनालीको जीवनलाई हामीले नजिकबाट नियाल्ने प्रयास गरेका छौँ । यस सम्बन्धि रिपोर्ट भिडियोबाट जानौं ।
ट्रक ड्राइभरसँग ३ हप्ता अफ’येर, गर्भव’ती बनाएर भागे’पछि १८ वर्षकी सरिताको य’स्तो बि’चल्ली (हेर्नुहोस भिडियो)
पुष्पा अधिकारीको केस सिहदरबार पुग्यो ! प्रहरीले रोकेपछी …भाग्य र शिशिर माथि खनिए तारा बराल (हेर्नुहोस भिडियो)